VAVEA SAMPANA ANTANANARIVO : Hivondronan’ireo avy amin’ny foko Vezo
Toy ny nataon’ny foko hafa, nivondrona naneho ny firaisankinany sy ny fikambanany ireo Malagasy avy amin’ny foko Vezo, monina sy mipetraka eto Antananarivo. 21 décembre 2017
Tsara ho fantatra fa efa tamin’ny taona 2011 no efa nijoro ny fikambanana Vavea izay ivondronan’ireo avy amin’ny foko vezo. Fikambanana izay manana ny foibe nasionaliny any Toliara. Tafatsangana kosa ankehitriny ny fikambanana Vavea sampana Antananarivo izay ivondronan’ireo mila ravinahitra eto an-drenivohitra. Toy ny fikambanana rehetra ihany dia anisany antom-pisian’ny Vavea ny hampivondrona ny terak’i Vezo sy hampahafantatra iny faritra iny.
Handray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny Vavea araka ny fanazavana. Isan’ny laharam-pahamehana ho azy ireo noho izany, ankoatra ny asa sosialy, ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Notsindrian’ny avy eo anivon’ny fikambanana fa tafiditra feno ao anatin’ny drafitr’asa tanterahan’izy ireo ny mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny fahitana ny faharavan’ny tontolo iainana an-drenivohitra sy ny fahalotoan’ny ranomasina any amin’ny faritra amoron-dranomasina no isan’ny nanetsika ny hambom-pon’ ireto mpikambana nanatanteraka ny drafitr’asa. Drafitr’asa izay azo ambara ho mampiavaka azy ireo ihany koa amin’ny fikambanana olona mitovy fiaviana hafa. Voambara fa hisy tsy ho ela ny fihaonam-be hotante rahan’izy ireo mba hampahafantarana ny fijoroan’ity fikambanana ity.